‘व्वाईफ्रेण्ड छन् होला, तर कहाँ छन् थाहै छैन’: नग्मा श्रेष्ठ (कलाकार) - Naya Online
शनिबार, कार्तिक ६, २०७८ (October 23rd, 2021 at 10:10pm ) अन्तर्वार्ता, ग्लामर न्युज, फिचर मोडेल, मोडेल वाच
चितवनमा जन्मेर काठमाण्डौमा बसोबास र अध्ययन गर्दै आएकी मोडल नग्मा श्रेष्ठ म्युजिक भिडियोमा व्यस्त छिन् । भविष्यमा सफल अभिनेतृ वन्ने अभिलाशा राखेकी नग्मा विज्ञापन, म्युजिक भिडियो र र्याम्प मोडलिङ गर्दै आएकी छिन् । जेपीजे इन्टरटेन्मेन्टको युट्युव कार्यक्रम चनमतीमा प्रीति योगीसँग गरेको कुराकानीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
म यो क्षेत्रमा लागेको ४ वर्ष भयो । सँगसँगै म अध्ययन पनि गरिरहेको छु । म अहिले वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक गरिरहेकी छु ।
मैले मिस एसएलसीमा भाग लिएर प्रवेश गरेकी हुँ । त्यसबाट केही अनुभवहरू बटुलेँ । त्यसपछि मिस इण्डिजिनियसमा भाग लिएँ । जसले गर्दा मैले केही विज्ञापनहरूमा काम पाएँ । पत्रिकाको विज्ञापनहरूमा काम गरेपछि म्युजिक भिडियो, टिभीको विज्ञापन, र्र्याम्पको मोडलिङमा अफर आउन थालेको हो ।
यसक्षेत्रमा लाग्नुपूर्व के गर्छु या बन्छु भन्नु सोच्नुभएको थियो ?
मैले सानैदेखि यसै क्षेत्रलाई नै सोचेको थिएँ । र, छिट्टै नै प्रवेश गरिहालेँ । जस्तो, म स्कुलबाट फर्कनसाथ टिभी खोलेर फिल्म हेर्न थालिहाल्थेँ । कलाकारको अभिनय देख्दा आफूलाई त्यस्तै गर्छु भनेर कल्पना गर्थे । तर त्यो कल्पना कल्पनामै सिमित राख्थेँ । अभिभावकलाई, साथीभाईलाई भन्न सक्दिनँ थिएँ । कुरा निस्किहाले पनि मन पर्दैन भनिदिन्थेँ ।
बढिजसो नेपालको पूर्वीभेगतिर तपाईले काम गर्नुभयो नि, कसरी ?
अँ मेरो पूर्वतिर बढि लिंक भयो । मैले पूर्वको झापा, मोरङ, खोटाङतिर काम गरेकी छु । कसरी भयो भन्ने कुरामा यसै भन्न सक्दिनँ । काम गर्नेक्रममा पूर्वको मान्छेसँग बढि अवसर प्राप्त भएर होला कि !
घरजम पनि पूर्वै त होला कि ?
खै भविष्य के हुन्छ, थाहा हुन्न । यदि भयो भने बोलाउने छु नि तपाईलाई ।
तपाईले धेरै काम गरिसक्नुभएको छ, चर्चित भइसक्नुभएको छ, कलेजमा घेराईमा पर्ने, अटोग्राफ माग्ने हुन्छ कि हुन्न ?
त्यस्तो हुन्न । त्यहाँ विद्यार्थीमात्रै हो ।
व्वाईफ्रेण्ड त बनाउनुभएको छैन नि ?
छन् होला, तर कहाँ छन् थाहै छैन ।
साथीहरूले के भन्छन् ?
साथीहरूले मलाई लाटी भन्छन् ।
लौं, बोल्नुहुन्छ त अनि ?
होइन, बोल्छु । तर सोझी छु । त्यसैले लाटी भनेका हुन् ।
फिल्मी क्षेत्रमा त राम्रा नराम्रा मान्छे छन् भन्छन् नि, तपाई नि फन्दामा पर्नुभयो ?
अँ, छन् । मैले नि भेटेकी छु राम्रा नराम्रा दुवै प्रकारका । तर छान्दैछान्दै जाने हो । राम्रोको पछि लाग्ने हो, नराम्रालाई छोड्ने हो ।
म्युजिक भिडियो खेल्न शुरु गर्दा त पैसा तिरेर आउनुपर्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
मैले त्यो सुनेको हुँ । तर मैले त पारिश्रामिक लिएरै खेलेकी हुँ ।
फिल्ममा कहिले देख्न पाइएला तपाईलाई ?
फिल्ममा काम गर्ने कुरा भइसकेको हो तर लकडाउनले गर्दा भएन । अब केही पछि होला ।
तस्बिरहरू नग्माको फेसबुकबाट